Myanmar njem - nsogbu nke omume
Home » Njem njem » Myanmar njem - nsogbu nke omume
Nkwalite ndị njem na-arụ ọrụ ọ bụla iji dozie nsogbu okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta ọha na eze dị ka nke ndị Rohingya na ndị ọchịchị Myanmar na-enwe ugbu a?
Ndi njem nlegharị anya nwere ike ị nweta ihe ngwọta maka ogologo oge nke ọtụtụ narị puku narị ndị gbara ọsọ ndụ Rohingya Muslim na-agafe ókèala Myanmar na Bangladesh?
Ekwetaghị m. N'ihe banyere mgbasa ozi mgbasa ozi, ekwenyere m na mgbasa ozi njem niile (ma ọ bụghị mgbasa ozi mgbasa ozi) na-akwalite njem nlegharị anya nke na-enye ndị mmadụ ohere, na-asọda n'ụzọ dị ukwuu nke ndị mmadụ, ọkachasị ndị ogbenye.
Ndi obodo mgbasa ozi na-acho igbochi nkwado ha maka isi ego a?
Azịza m bụ M, Achọrọ m ịkwado ma bulie ya. O doro anya na enwere m nchegbu na ọtụtụ agbanweela ma enwere m olileanya na ọnọdụ ga-akawanye mma n'oge na-adịghị anya. Ekwenyere m n'otu aka ahụ na site na ịkwado njem nleta na ego ọ na-enye, ọ bụghị azịza ya.
Bagan oge ochie
Enweghị nchedo ndị njem na Myanmar n'ihi nsogbu ndị gbara ọsọ ndụ dị na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke dị nso na ókèala Bangladesh, bụ nke ndị na-eme njem nleta na-agakarị.
Puppets maka ọrịre n’ahịa dị nso n’ụlọ nsọ Ananda na Bagan
Ileta Mianmaa bụ ihe kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ọ ga-abara ndị mmadụ n ’obodo niile uru maka agbụrụ ọ bụla ma ọ bụ okpukpe ọ bụla.
N'ọtụtụ mba, anyị nwere nsogbu ndị yiri ya site na esemokwu dị n'etiti otu okpukpe dị iche iche, na-abụkarị mpaghara ókè.
Dị ka Myanmar, ekwenyesiri m ike na njem nleta enweghị ọrụ ọ bụla iji dozie okwu a. A na - enwekarị nkụda mmụọ maka ndị njem ịgagharị ebe ndị a. Agbanyeghị nke a anaghị akwụsị ndị njem nleta na-ekpori ndụ n'oge ezumike. Iji dozie nsogbu ndị a ga-ewe usoro ọchịchị.
Agụọla m Mianmaa ọtụtụ oge. Na nso nso a, m gara ugboro abụọ; n'ọnwa Ọgọst na Ọktọba afọ a.
Nkume Ọma ahụ dị na MON State
Nleta m gara n'August bụ nleta nke onwe m na otu ndị enyi Thai iri. Ndị otu a nwere mmasị na ụbọchị 3 nke nleta ahụ, na-eme ihe ruru eru; na-eri nri ma na-aga njem Golden Rock a ma ama na Mount Kyaiktiyo (Kyite Htee Yoe). Otu n’ime ebe kacha mkpa okpukpe dị na Mianmaa.
Nleta m gara n’ọnwa Ọktọba bụ ka m leba anya n’ihe na-eme na Mianmaa gbasara ndị bịara njem nlegharị anya. Eji m otu izu gaa mba ahụ n'okpuru nduzi nke Myanmar Tourism Marketing (MTM).
Ndị njem Phaung Daw Oo na Lake Inle
Ihe nlegharị anya nke njem ahụ bụ nleta anyị na Inle Lake iji lee ọmarịcha mmemme Phaung Daw Oo na agbụrụ ụgbọ mmiri nwere otu ụkwụ.
Ọtụtụ puku ndị njem nleta na ndị obodo na-enubata na-ele agbụrụ ahụ
N’oge nleta abụọ m gara aga, anyị nwere nanị ihu-ọchị obi ụtọ na nnabata dị egwu. Ọ dịtụghị mgbe nchekwa bụ nsogbu. Ndụ dị nnọọ na-aga n'ihu na nkịtị.
Ndị ọkụ azụ na Inle Lake na-abụ ndị na-ese foto
Mianmaa na-abanye n'ime oge dị elu ma ọ bụ nnukwu oge iji gaa mba ahụ. Aga m akwado ka ị mee nke a.
Enwere m obi iru ala dị ka onye so na mba ndị na-eme njem na-aga n'ihu na-aga Mianmaa na inye akụ na ụba ego njem nleta yana ịgbasa ahụmịhe njem m. N'ihe banyere nsogbu nke omume (iji kwado njem nlegharị anya na Myanmar), azịza m dị mfe - ee.
Onye a mụrụ na Bekee bụ Andrew J Wood, bụ onye edemede na-ede akwụkwọ njem na-enweghị akwụkwọ yana maka ọtụtụ ọrụ ya bụ ụlọ ọrụ ọkachamara. Andrew nwere ihe karịrị afọ 35 ile ọbịa na ahụmịhe njem. Ọ bụ onye otu Skal na onye ntụzi nke WDA Travel Co. Ltd na ndị enyemaka ya, Thailand site na imewe (njegharị / njem / MICE). Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na họtel na Mahadum Napier, Edinburgh. Andrew bụkwa onye so na Kọmitii Executive nke Skal International (SI), Onye isi ala SI SI THAILAND, Onye isi oche ọgbakọ nke SI BANGKOK ma ugbu a bụ SI AA A.VP Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Director nke Mmekọrịta Ọha, Skal International Bangkok. Ọ bụ onye nkuzi ihu ọha mgbe niile na mahadum dị iche iche na Thailand gụnyere Hospitallọ Akwụkwọ Ọbịa nke Asslọ Akwụkwọ Mahadum Assumption na Hotellọ Akwụkwọ Ọzụzụ Japanlọ Akwụkwọ Japan na Tokyo.
Oftù Ndị Njikọ na Njem Nleta India na Ọbịa na-akpọsa ndị isi ọhụụ
Cobalt Air meriri CAPA Airline Mmalite nke Afọ